Ebe ọ bụ na Linux na-egosi gị ugbu a nke ị na-eji | Site na Linux
Na-erite uru nke ohere ọ na-enye anyị ka anyị gbanwee na ihe nchọgharị anyị na Onye ọrụna Ndokwa ị pụrụ ịhụ ugbu a na Mwepụ ị na-eji…
Ọ bụrụ na ịpịrị na akara ngosi nke nkesa ahụ, a ga-egosipụta ndenye niile metụtara ya, yabụ ka anyị na-ede banyere nkesa kachasị amasị gị, nke a ga-abụ usoro ngwa ngwa iji chọta isiokwu nke mmasị gị.
Anyị atụkwasịla ya nkesa kasị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ nke GNU / Linux anyị na-agụnye Windows:
N'ezie, ha niile abụghị obere na ntakịrị ntakịrị anyị ga-atụkwasị ndị ọzọ, gụnyere iOS y Mac oS. Ọ bụrụ na disro gị apụtaghị ma ọ bụ na egosighi ya n'ụzọ ziri ezi, biko zitere anyị ọkwa site na nke anyị mpempe kọntaktị.
Anyị chọrọ ikele Jako de ụmụ mmadụ maka ịtụ anya akụkụ nke ọrụ ahụ PHP iji mezuo nke a.
Added by KZKG ^ Gaara:
Ọ bụrụ na nke a emee gị, ọ nwere ike ịbụ n'ihi ihe abụọ:
N'ihi na ị na-eji distro nke B NOTGH in na ndepụta mbụ.
N'ihi na na ihe nchọgharị gị ka ị ghara itinye UserAgent nke ọma.
N'agbanyeghị ihe kpatara ya, anyị na-arịọ gị Kpọtụrụ Iji nyere gị aka ma nyere gị aka, otu a ị ga - enwe ike ihu akara ngosi nke distro ị na - eji, nweta isiokwu ndị metụtara distro a ọzọ, anyị ga - enwekwa ọ pleasedụ karịa inyere gị aka.
Agbanyeghị, nke a bụ njikọ nke egosipụtara nkuzi banyere etu esi gbanwee UserAgent nke ihe nchọgharị ọ bụla:
1 Gbanwee onye ọrụ gị na Opera (karịrị nke ndị nkịtị)
2 Atụmatụ: Etu esi agbanwe onye ọrụ Chromium?
3 Ndụmọdụ: Etu esi agbanwe onye ọrụ Firefox?
Gbanwee Onye Ọrụ Ọrụ na opera (karịrị nkịtị)
Atụmatụ: Otu esi agbanwe Onye Ọrụ Ọrụ site na chromium?
Atụmatụ: Otu esi agbanwe Onye Ọrụ Ọrụ site na Firefox?
Anyị (elav na m) abụghị programmers ma ọ bụ web mmepe, ya mere njehie ọ bụla i nwere na nke a, obi abụọ, ajụjụ, mkpesa, nsogbu, echiche ma ọ bụ aro biko mee ka anyị mara, anyị ga-aza ihe niile ị chọrọ ịma 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndokwa » Ebe ọ bụ na Linux ugbu a na-egosi gị nke distro ị na-eji
Ihe 99 kwuru, hapụ nke gị
Ọ ka egosighi m ozi nke disto m jiri 🙂
Maka na agaghi ahazi onye ọrụ gị na Firefox. Lelee okwu gị, nke gosipụtara akara ngosi Firefox na nke penguuin, n'ihi na ọ chọpụtaghị OS gị.
Amaghị m mana m na-ahụ esemokwu gị na onye gị na ya ga-enwe, n'etiti anyị, ekwenyere m na ị tinyere akara ngosi Debian, mana ọ ... doro anya na ọ na-azọrọ gị, n'ezie n'ihi afọ ndụ ya ji ụgwọ ịkwanyere gị ùgwù, hahahahaha.
Hahaha ana m ahụ ihe ọchị na afọ 24 m. .. Bịa na ha enweghị ọtụtụ hahaha
M ga-esi: «you na-eji ??? iji nweta <° Linux ", na m na-eji ArchLinux. Ọ bụla ahụhụ? Ndewo ndị enyi! 🙂
Ekele Gregorio na-anabata gị DesdeLinux. Ọ bụghị ahụhụ n'ezie, ọ bụrụ n'ịlelee okwu gị, onye ọrụ gị achọpụtabeghị nke GNU / Linux nkesa ị na-eji. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji tinye ugbu a ???… Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe Onye ọrụ Chrome, ị nwere ike iduzi gị Atụmatụ a. Have ga-agbanwe ya ntakịrị, n'ihi na echere m na na / wdg / ị gaghị enweta chromium, kama kama chrome ma ọ bụ google-chrome ..
Chei, Gespadas n'onwe ya 🙂
Obi uto iguru gi enyi 😀
Ka Arch puta (nke n'eziokwu bu ihe kacha mma hahahaha) aghaghi igbanwe Chrome UserAgent, mee ule ma hu.
Otu ka m 😉
Gbanwee Firefox UserAgent ma tinye nke a:
Ọ bụrụ na ị maghị etu esi gbanwee ya, ị kwuo ya, a ga m enye gị aka 🙂
Ọ bụ ezie na ... ịbụ onye ọrụ njide, ị ga-ama nke a na ọtụtụ ndị ọzọ LOL !!!
N'eziokwu, nwoke a na-eme ka m ghọta ihe ọ na-ekwu mgbe niile banyereLaha. Ọfọn, ọ maara Arch nke ọma.
Ma ọ bụrụ na ị nyere ya aka n'ụzọ mmetụta, gịnị bụ ọnụ ahịa Mass?
Oops! Agụbeghị m azịza ya ... Kedu isi
Akwa! Edozi, i meela nke ukwuu.
Juas! Lee ka elav si biri na Arch anyi ga - ahuta aja. (blog.fromarchlinux.net) xD
HAHA gụchara ihe niile, Arch were naanị ụbọchị abụọ, ọ laghachiri Debian n'okpuru amụma na ọ dịịrị anyị mfe ịnweta Debian repos karịa nke Arch, nke na-abụghị eziokwu ... mana bịakwa, m na-eji ya. Arch na anwughi m HAHAHA.
Ugbu a, anyị na-egosi distro onye ọrụ ahụ n'ụzọ dị iche, dị iche na nke enwere ike ịhụ na nseta ihuenyo nke isiokwu a ... n'onwe m, ekwere m na m nwere mmasị na ụzọ ochie karịa HAHA
Arch abụrụla ụlọ enyi m nwanyị, ebe m nwere ntụsara ahụ ma mgbe ụfọdụ m na-agafe ọrụ, Debian bụ ụlọ m. Enweghị m ike ichere ruo elekere isii nke mgbede ụbọchị niile maka ISP m ka m budata ngwugwu. Enweghị m ike ịtụ anya ibudata mmelite nke ihe ruru 6Mb (ma ọ bụrụ na ha gbakọta) na ịntanetị. Ọ dị mfe ịnweta mmelite mpaghara m ma nweta ihe m chọrọ site na ya. Arch na-amasị m, mana m hụrụ Debian n'anya. Emere m nwụnye na Ọkachamara na ọnọdụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na Arch, ihe niile na-ata nri 😀
Naaada! Are na-agbaghara! xD
Na-ahụ na ihe gbasara nkwụghachi na ọnọdụ ... Kedu ụdị nkịta, na-ekwu okwu ọjọọ ma n'oge adịghị anya.
(M gbaghara gị makana n'ime obere obi m, ọ ka nwere obere oghere maka Crunchbang xD)
Nke a dị mma ma ọ bara ezigbo uru.
Otu ihe onyonyo anyị kwesịrị idozi bụ nke Sabayon .. 😀
Ọfọn, m na-eji LMDE ọ naghị amata m. Ọ dị m ka eleghara m anya, XD
Zaghachi ka isargone
Kpọmkwem otu ihe ahụ na-eme gị dịka Gregorio Espadas. Ihe ngwọta nke mere na ị gaghị eleghara anya dị ebe a.
HAHA nah, ọ dịghị ka ọ na-ekwu elav, anaghị eleghara gị anya ... ka a ghara ịmata gị dịka o kwesịrị ịbụ HAHAHAHAHAHA
Gbanwee UserAgent na ị ga-ahụ otú jụụ na akara ngosi bụ 😉
Ọ masịrị m, echiche ahụ masịrị m. daalụ. otu n'ime blọọgụ kachasị amasị m !!!
Daalụ 😀 anyị masịkwara ya hehe
Ọ ga-abụ ihe na-adọrọ mmasị ịhụ n'oge na-adịghị anya ọnụ ọgụgụ banyere distros ndị ọbịa na-eji blọgụ ahụ.
Ọfọn, ọ dị ka ọ maghị distro m na-eji (emepeuse), mana ọ ga-abụrịrị ihe nhazi arụmọrụ Opera.
Nke a bụ otu esi ahazi Opera's UserAgent:
Gbanwee onye ọrụ-ihe nnọchianya nke ihe nchọgharị m na saịtị wee gosi akara ngosi nke distro m na-eji? Kedu ihe m kwesịrị ịme ọzọ? Tinye okwuntughe m n’igbe?
Ọ bụ ezie na anyị maara ibe anyị na ihe niile, ọ naghị afụ ụfụ ịnabata gị na saịtị ahụ 😉
Ugbu a ... ọ bụrụ na echeghị ihe nchọgharị ahụ na ndabara iji gosipụta distro (dịka FF dị na Ubuntu dịka ọmụmaatụ), kedu ka anyị kwesịrị isi mata distro agụ? ...
Onweghị ihe, ị ga-agwa m 😉
Oh na agbalila, ichota ebe a agaghi eme gi ihe obula, anyi ejiri 2 trolls mee ihe kariri gi LOL !!!
Nabata saịtị ahụ n'ezie, saịtị nke na-agaghị ajụ gị maka paswọọdụ mgbọrọgwụ, ma ọ bụ na-amanye gị ka ị gbanwee UserAgent, ọ bụ ihe ọ bụrụ na ịchọrọ ime, ọ bụrụ na ịchọghị, mgbe ahụ ị chọghị.
Ọ bụrụ na nkatọ gị na-arụ ọrụ, ọ pụtara na ị ga - enyere anyị aka imeziwanye usoro nnabata anyị ji eme ihe ugbu a (PHP + UserAgent), amaghị m, ma eleghị anya ihe dị na Python ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ, mana ọ bụrụ na ọ bụghị na ị ga - enyere anyị aka ma ọ dịkarịa ala na echiche ma ọ bụ njikọ na HowTo , nke ọma ... ọ pụtara na obere ihe ịchọrọ bụ inye aka ka ọ bụ? 😀
M kwughachiri nnabata nke KZKG ^ Gaara nyere gị:
Ọ bụrụ na ọ bụ onye ọzọ, m ga-enwe obi abụọ banyere ọgụgụ isi ya nwa oge n'ihu okwu dị ka nke ahụ, mana na-esite n'aka gị, echere m na ebumnuche ya abụghị naanị ịpụta dị ka Troll.
Youkwesighi ịhazi Debian gị ka ọ bụrụ otu ị masịrị ya? Kedu ihe dị iche banyere imezi Onye Ọrụ? Ọzọkwa onye òtù ọlụlụ, iwu ejighi gị igbanwe ihe ọ bụla, yabụ na ọ bụ mkpebi gị.
@kzkggara: Echeghị m na m nwere oge iji tufuo ihe ndị a. Ekweghị? 😀
Bịanụ, ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ naanị ịgbagha na ebe ọ bụ na ị na-agwụ gị ike, ị kpebiri ịhapụ anyị okwu, mgbe ahụ ọ nweghị ihe dị njọ ... aka ma ọ dịkarịa ala na ntụnye ma ọ bụ ihe ọ bụla, ga-ahapụ okwu ọzọ ma ọ bụ ihe yiri ya 😉
Anyi ga ahu ihe o jiri LOL mee !!!
N'ezie anyị nwere ọnụ ọgụgụ ndị ahụ, anyị ga-egosi ha n'oge na-adịghị anya .. 😀
Anyị ga-egosipụtakwa mba 😉
Can nwere ike igosi ọtụtụ ihe, mana maka nke ahụ, anyị ga-eme obere ntụgharị na ọtụtụ ọrụ mmemme. Nke a bụ naanị ụdị nke mbụ, n'ezie anyị ga-aga n'ihu na-emeziwanye ya.
Ndị agadi nwere ahụmịhe karịa na ihe niile hahahaha
Ogbenye nke obere umuaka ndi na enenweghi ike inweta ihe uto di ndu nke ndu.
Ọ ga-akara m mma iberibe ebe a karịa ịrị elu. M ga-enwe ahụmahụ na ihe, nke ahụ masịrị m n'ezie
Ọ bụrụ na m jiri Xubuntu kedu ihe m ji nweta Ubuntu? Ihu ọma enwere ike ịsị na ọ bụ otu, mana ọ na-eme m ịmata.
N'ihi na onye ọrụ gị na-egosipụta Ubuntu aha / logo. Ọzọkwa, ọbụlagodi mgbe ị nwere Xubuntu na Onye Ọrụ Onye Ọrụ, njirimara ahụ agaghị apụta nke ọma n'ihi na anyị atụkwasịbeghị ya.
My fedora na-egosi m ezigbo mma, enwere m mmasị na saịtị dị ka ahaziri onwe ya ma raara onwe ya nye dị ka nke gị, na-ekele gị ọzọ.
Daalụ, nke a bụ ụzọ anyị hụrụ iji mee ihe na-atọ gị ụtọ (ma ọ bụ opekata mpe) ndị ọrụ anyị niile 🙂
Aghọtara m na mgbe m na-eji Aurora (ebudatara na tar.gz), naanị m nwetara Linux, mana na ịgbanwe Onye Ọrụ ahụ, enwetara m Fedora.
HAHA nke ahụ bụ nsogbu ahụ, na ọ bụrụ na anaghị edozi UserAgent nke ọma, mgbe ahụ ọ naghị egosi akara ngosi nke distro 🙁
Lee otu esi egosi m 😉
Y _¬ Jum… iwere ohere tinye ọkwa ahụ ka m ghara igosi Arch gggrrrr …… m. LOL !!!!
Ekele na obi ịmara na ị masịrị ya 🙂
Oge ikpeazụ m kwuru, achọpụtaghị distro ahụ, mana n'oge na-adịbeghị anya, ahazila m onye ọrụ gị iji hụ ma ọ na-arụ ọrụ
Ee ee, distro ahụ achọpụtala gị. Ọ na - achọpụta na ị na - eji Ubuntu, mana ... ị na - eji Ubuntu ka ọ bụ Kubuntu?
Beingbụ otu distro na gburugburu ebe obibi dị iche ọ na-ekewa ha? Echeghị m na m na-eme, ọ bụ ya mere, n’ihi na ọ bụ otu
Ọ ga-adị mma ịnwe ike igosi ya akara ngosi ọzọ dị mma dabere na gburugburu ebe obibi, mana n'eziokwu, amaghị m etu esi eme nke a, ọ bụrụ na saịtị ahụ bụ Python ma ọ bụghị PHP enwere ike ịnwe ohere, mana anaghị m mara ... naanị ihe m nwere ike iche na ọ bụ edemede na-agba ọsọ na mpaghara na-agụ, mana nke ahụ ga-abụ oke mkparịta ụka
Eji m "kubuntu" mana n'ime onye ọrụ ihe m depụtara ubuntu.
N'agbanyeghị, anyị ga-agbakwunye Kubuntu akara ngosi na arụmọrụ ọhụrụ a, ọ dị m nwute na agbaghara ya ụnyaahụ, mgbaghara m :)
Aga m ahụ ma m tinye ya ugbu a 😀
Bụ ihe ọ ga-abụ nna nna
HAHAHA Agaghị m agwa gị ahịrịokwu m kwuru elav oge ọ bụla ọ malitere iberibe, n’ihi na ọ bụ ihe a ga-ekwu n’ihu ọha HAHAHAHA
Ọ dị m ka ịkpa ókè, mgbe m na-eji Chakra, ana m enweta «using na-eji ??? iji nweta <° Linux ", nke a bụ izu ọjọọ, HAHAHAHAHAHA.
Chakra apụtaghị na m, m na-eji rekonq XD
Enweghi nkwado ọ bụla maka Chakra, ọzọ distro nke anyị ga-agbakwunye nkwado lol ... Ana m arịọ mgbaghara ^ _ ^ U
Ha kwesịrị itinye Kubuntu, m ga-enwe ekele ruo mgbe ebighi ebi. (^ - ^)
Edebela ya mana ị ga-agbanwezi UserAgent
N'ezie, Kubuntu dịworị na 😉
Ihe na - eme bụ na ọ bụrụ na ihe nchọgharị gị (Opera) anaghị agwa saịtị ahụ na ị na - eji Kubuntu, anyị abụghị ndị na - eche nkọ, ị ga - agbanwezi UserAgent (ọ dị ezigbo mfe) nke Opera ime nke a.
Isiokwu a ga-enyere gị aka: https://blog.desdelinux.net/modifica-user-agent-opera-mas-alla-de-lo-ordinario/
Oh daalụ Gaara !! XD ugbu a ọ bụrụ na ọ pụtara appears
Nkuzi ahu enyerem aka nke ukwuu (^ _ ^)
Atụbuola m ogbo ahụ ... mana ọ dị ka taa bụ ụbọchị ọma m ... ọ gbanwere !!
M na-eji chakra kachasị ọhụrụ nke oge a achọpụtaghị ya. M nwere firefox 11 arụnyere dị ka n'ùkwù n'ùkwù. Aro ọ bụla?
Ga-agbanwerịrị onye ọrụ gị.
Ugbu a ọ bụrụ na m bulie ya iji hazie
Ule 1,2,3 🙂
Zaghachi Rogger Ortega
Ule 1,2,3,4 🙂
Ndo ma oburu na m bia ugbua ma obu na m nwetakwara ihe m ji eme ihe ??? na blọọgụ ọzọ (humanOS) Enwere m ihe yiri ya ebe a, m na - eme otu ihe ahụ dị ka ebe ahụ: ana m ahapụ uru m bara uru nke «General.UserAgent.Override»
Ọ bụrụ na mmadụ ga-enwe obi ọma ịgwa m na enwere m nsogbu na-adịghị mma iji dozie ya, m ga-enwe ekele maka ya na ọtụtụ ihe ugbu a na-ezube igosipụta FromLinux dị ka UserAgent.
ọ dịghị ihe….
Mozilla / 5.0 (X11; Debian Linux i686; rv: 3.5.16) Gecko / 20100101 Debian Iceweasel / 3.5.16 dị nnọọ ka ị gwara m mana m ka na-ahụkwa akara ahụ ‘Are yi ??? iji nweta »na-afụ ụfụ…. Aga m anọ na-ahụghị blọọgụ na agba Debian
Damn ... ọ na-adabara m na ọ bụ ihe sitere na nsụgharị Iceweasel gị, na Onye ọrụ ya dị iche ma ọ bụ ihe yiri ya ... O_O ...
Aga m agbali iji ihe nchọgharị ọzọ (Chromium) iji hụ ma ọ bụ nsogbu ihe nchọgharị mana anaghị m ekwe nkwa ihe ọ bụla hehe
Ugbu a Chromium kwesịrị ị pụta ma ọ bụrụ na m mere ya nke ọma… ..
Ọfọn, enweghị m ike ịnweta ya, ana m eji Arch 64 bits na Chromium. Kedu ahịrị m kwesịrị itinye na exec, agbasoro m usoro ndị ahụ na enweghị ihe ọ bụla.
Na-etinye Chromium kama nke Chrome ma ị na-enweta akara ngosi Chromium? Ọ bụrụ otu a, mgbe ahụ ọ bụ ahụhụ na ngwa mgbakwunye ihe nchọgharị ahụ na-amata. Biko, ọ bụrụ otú ahụ, mee ka m mara, iji dozie ngwa mgbakwunye ma kọọtụ ebe ahụ (wee nye azịza ya) na onye nrụpụta mgbakwunye gọọmentị 😉
Ọ dị mma mgbe m mechara nyocha, Archlinux pụtara na distro m na-eji, nke m na-amaghịzi bụ ihe nchọgharị ahụ, nke bụ chromium.
Emezila m ya ma ọ dị ka ọ na-arụ ọrụ. Kedu akwa na Arch. You ga-edozi ihe niile nke nta nke nta, ma mgbe ahụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ozugbo edoziri ihe niile, na ilebara mmelite anya pụrụ iche ... ị gaghị enwe nsogbu 😀
N'ime ndepụta a, Trisquel na Lubuntu m na-efu ... Echere m, inwe akara ngosi nke nwa canonical na-ewute m.
Ọ bụrụ na itinye na UserAgent na ị na-eji Trisquel Echere m na ọkọlọtọ ga-apụta, na ihe m na-ekwu ejighi n'aka ... Anaghị m echeta 🙂
Ọ bụrụ na ị zitere m .SVG nke logo nke distros ndị a, ana m eme ndokwa ma anyị na - akwado ya 😀
gbaghara m, ana m anwale ihe a
Mageia ka na-efu efu.
Onwere onye mara ka esi dezie ihe eji eme ihe na Rekonq?
ka anyị hụ ma ọ na-arụ ọrụ
akara arch apụtaghị
Ezigbo mma peeji a
Yak ise nte enye etiede
Idozi njehie na Linux Mint 12